China YASKAWA palletizing robot MPL800Ⅱ mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Ukurhangqa iRobhothi Inkcazo:
Amalungiselelo ebhokisi Ukubetha irobhothi MPL800Ⅱ inomgangatho ozinzileyo kunye nokuchaneka, enobunzima obukhulu bokuthwala obuyi-800Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-3519mm. Ukurhangqa iirobhothi Zisetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni, kumalungiselelo, ukutya, isiselo, imichiza, ulwakhiwo, amayeza kunye namanye amashishini. Banokugqibezela ukupakisha, ukuphatha, ukuthambisa ukutya, kunye nokunciphisa ukusebenza kweemveliso ezahlukeneyo ezinje ngokutya, amayeza, ibhiya kunye nesiselo, njl njl.
Isantya esiphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu kwebhokisi Ukubetha irobhothi MPL800Ⅱ Isebenzisa i-axis yengalo ende ye-axis kunye ne-U-axis efanelekileyo yokunyanzela ukufezekisa olona luhlu lukhulu. Isakhiwo solawulo lwe-T-axis sangaphakathi sinokuqulatha iintambo ukunqanda ukuphazamiseka kweZero kwizixhobo kunye nezixhobo zepheripherali. Isoftware ebethelayo iMOTOPAL inokufakwa, kwaye inkqubo yokufundisa ingasetyenziselwa ukwenza ukusebenza kwePalletizing. Inkqubo ye palletizing yenziwe ngokuzenzekelayo, ixesha lokufaka lifutshane, kulula ukukhetha okanye ukutshintsha imisebenzi, elula kwaye kulula ukuyifunda, kunye nokuphucula ukusebenza ngokukuko.
Iinkcukacha zobugcisa ze Ukurhangqa iRobhothi:
4 800Kg Ubukhulu: ± 0.5mm
2550Kg 10kVA 65 ° / umzuzwana 65 ° / umzuzwana
65 ° / umzuzwana - ° / umzuzwana - ° / umzuzwana 125 ° / umzuzwana
Amalungiselelo ebhokisi Ukubetha irobhothi MPL800Ⅱ Imodeli ekhethekileyo esetyenziselwa ukuhambisa iipelethi, iibhokisi kunye nezixhobo. Isombulula ukunqongophala kwabasebenzi, iphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso yabasebenzi, inciphisa iindleko zemveliso, inciphisa uxinzelelo lwabasebenzi, kwaye iphucula imeko yemveliso. Ngenxa yesithsaba sokungunda kwesifo semiphunga esitsha, ukuthintela abantu kwimisebenzi egxile kwimveliso,Ukurhangqa iirobhothi ziye zaba lukhetho lwabasebenzisi abaninzi nangakumbi.
Egqithileyo YASKAWA palletizing robot MPL500Ⅱ
Okulandelayo: Ipeyinti yeYaskawa Robot Motoman-Mpx1950
Ukubamba ingalo yeRobot
Inkqubo yeRobotic Palletizing
I-Yaskawa Palletizing Robot
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis,